OKUVALIWE - Ukuhweba Robot - EA World FX - Equiti
I-EA World FX
Ngenxa yokuphathwa kabi kokudonswa phansi kwamarobhothi e-EA World FX, nginqume ukungabe ngisabancoma kuze kube kukhishwa esinye isikhathi.
Sebenzisa Autotrade Gold esikhundleni.
Idizayinelwe ukuhweba ngababili be-EUR / USD, i-Coved ingenye yesoftware enhle kakhulu ehlangene nobuhlakani bokufakelwa kanye nobunye bobuchwepheshe bokulawulwa kwezinhlekelele. Okuhlanganisiwe kusetshenziswa amaningana amasu okuhweba futhi inganquma ukuthi yikuphi okuhle ongakusebenzisa ngokuya ngesimo samanje semakethe. I-Coved inohlelo oluqinile lokuvikela i-Stop Loss, okusho ukuthi okunye ukuhweba kungavalwa kukubi.
Utshalomali oluncane / iRobot
Awazi ? Thatha iseluleko sami:
Hlola inyanga engu-1 bese uthola ama-winnings akho nokubheja kwakho kokuqala kokuqala.
Phinda uthole ngenyanga eyodwa, okulingana nezimali nenzalo yencwadi yakho yokupasa engu-A engaphezu kweminyaka emihlanu.
Izinzuzo zamarobhothi e-EA World FX
Phatha futhi ulawule izimali zakho. Faka idiphozi bese ukhipha noma kunini. Nguwe kuphela onokufinyelela kutshalo-mali lwakho: Isikhwama sokuqala + Izinzuzo ezikhiqizwayo.
Isoftware yokuhweba ezenzakalelayo. Awekho amakhono okuhweba adingekayo.
Finyelela izixazululo zokuhweba kwi-Forex ebizwa nangokuthi iMakethe Yezimali.
Ukusebenza kahle ± 10%
Imali engenayo engaguquki efinyelela ku-10% ukubuya nyangazonke.
Iminyaka engu-3 yokuhlolwa / irobhothi
Iminyaka engu-3 yokubuyiselwa emuva nonyaka ongu-1 wokuhlolwa ezimeni zangempela zemakethe.
Qala ukuhlolwa ngenani eliphansi lama- $ 100 / irobhothi.
Imiphumela esobala ngesikhathi sangempela ihlolwe yi-Myfxbook.
Kufika ku-10% umholo wanyanga zonke nge-Coved
Qala ukuhweba nge-Coved
Ipulatifomu evikelekile yokuthenga nokuthengisa imali yakho ye-crypto.
Bhalisa ku-EA World FX
Ipulatifomu yokuxhuma ehlose ukwabelana nokusebenzisa amarobhothi okuhweba.
Broker IsiNgisi esilawulwa yi-Financial Conduct Authority (FCA).
I-COINBASE Tutorial - Amathiphu Namasu ku-Coinbase
Ama-cryptocurrensets angama-250 atholakalayo.
Binance bazobe sebekunikeza imininingwane yabo yasebhange.
Kulokho Binance ayisatholakali ngaphakathi kwe-European Union, kulandela iBrexit, ngikweluleka ngokuqinile ukuthi uye kwikhawunta yebhange lakho noma ushayele umnikazi wakho imali ukuze akwazi ukufaka imali Futhi ikakhulukazi kungenzeka irekhodi Binance njengomzuzi omusha kokuthengiselana kwakho okulandelayo ... FUTHI akakhohlwa uku khuluma "kwakhoIkhodi Yesithenjwa" ngaphambi kokwenza ukudluliswa.
Igama Lomhlomuli: Binance
Ikhodi yesithenjwa: I-XXXXX
Igama lebhange: Clear Junction Limited
Ikheli lasebhange: 15 Kingsway, London WC2B 6UN, UK
Ngingakwenza kanjani ukuhoxa ngama-Euro ku-akhawunti yami yasebhange?
Ukuze uhoxe ku-akhawunti yakho Binance kwi-akhawunti yabo yendabuko njengeCrédit Agricole, Caisse d'épargne, Crédit Mutuel, BNP Paribas noma inkampani ejwayelekile, njll. kufanele ukhombise i-IBAN yakho, kepha ngaphezu kwakho konke kufanele ube nama-EUROS ambalwa. Ngakho-ke kuzodingeka uguqule ama-cryptocurrensets akho abe ama-euro.
Iya ku-Wallet> Spot Wallet> EUR (ukuhoxa) noma iya kuleli kheli: https://www.binance.com/fr/.../fiat/EUR
Khetha Ukudluliswa Kwebhange (SEPA)
Khombisa inani ngama-euro ozolidlulisa
Khombisa i-akhawunti yakho ye-IBAN
Ukuthengwa kwelayisense lakho lokufinyelela kungxenyekazi ye-EAWorldFX
Ukubhaliswa kwe-EA WORLD FX
Inkampani ye-EA World isebenza ngokukhangisa ngenethiwekhi. Akunakwenzeka ukubhalisa ngaphandle kwe- isixhumanisi sokudlulisela. Lapho udala i-akhawunti:
Gcwalisa ifomu lokubhalisa.
Ukunakwa, inkambu yokuqala "Igama lomsebenzisi"kuzoba ukungena kwakho ngemvume ku-EA World FX.
Bukela okokufundisa kwevidiyo - 8:53 min
Uma usubhalisile, kufanele ufake imali yokuthenga ilayisense lakho.
Landela lezi zixhumanisi: Ideshibhodi> Ezezimali> Idiphozithi
bhala 250, qinisekisa futhi uqinisekise.
Gcina kahle lonke inani ku-bitcoin
(isibalo esingaphansi kwe- $ 250.00, isibonelo: 0.0263 ...)
Gcina ifayela le-ikheli lokudlulisa ngezansi.
Bukela okokufundisa kwevidiyo - 1:11 min
Faka ikheli lediphozi ku-Coinbase Pro
Landela lesi sixhumanisi: https://pro.coinbase.com/profile/address-book
Chofoza kusixhumanisi "Faka ikheli elisha":
Ikheli: (Dlulisa ikheli kusuka kusinyathelo 2)
Isibonelo: 3EJQBYJiRXe2qQschruXYTJ1kp ...
Umaki / i-ID / Imemo: (shiya kungenalutho)
Lapho nje usubhalise ikheli, kufanele ulinde imizuzu / amahora ambalwa ukuze ikheli lakho libe nombala omhlophe.
Uzokwazi ukudlulisa izimali futhi ngaleyo ndlela uthenge ilayisense lakho le-EA World FX.
Bukela okokufundisa kwevidiyo - 1:39 min
Ngemva kwesikhashana ...
Ku-coinbase pro, ikheli lakho alinalutho.
Buyela emuva Coinbase.com : Ideshibhodi> Iphothifoliyo
Etafuleni lezimpahla, chofoza ku-Bitcoin, bese kunkinobho "Envoyer"ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kwesokudla.
Faka ikheli lokudlulisa le-BTC
Faka inani eliqondile ku-BTC
Ngemuva kwamahora ambalwa… Bheka ukuthi imali ifikile yini ekhasini Ezezimali> Idiphozithi. Bese ubuyela ekhasini Expert Advisor futhi uthenge ilayisense le- $ 250 ukuze uyisebenzise.
Bukela okokufundisa kwevidiyo - 5:50 min
Lapho nje ilayisense lakho le-EA World FX selisebenza, isixhumanisi esiya ku- broker I-Equiti izofinyeleleka kuwe. Ngemuva kwalokho ungavula i-akhawunti nabo.
Ungabhalisa kanjani ne broker I-Equiti?
Ungayifaka kanjani imali nge broker I-Equiti?
Ungawavula kanjani amarobhothi wakho wokuhweba we-EA World FX nge-Equiti?
Ungayikhipha kanjani imali nge broker I-Equiti?
Ungakulandela kanjani ukuvela kwe-akhawunti yakho yokuhweba?